नेपाल आइडल Archives | NEPALI Live
Category - नेपाल आइडल
नेपाल आइडल तेस्रो सीजनको सबै भिंडियोंहरु नेपाल आइडल यूटूब पेजबाट साभार गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल आइडल सीजन-३ को ताजले सज्जा चौलागाई शुसोभित भएकी छन।पहिलो महिला आइडल सज्जाका आगामी दिनहरु मज्जासंग बितुन ।- नेपाली लाइभ टीम
पहिलो नेपाल आइडल बिजेता बुद्ध लामाको नया गीत भर्खर सार्वजनिक भएको छ। ”हेरीरहु जस्तो” बोलको यो गीतमा बुद्धलाई साथ दिएकी छन गायिका ममता गुरुङ। उनी पनि नेपाल आइडल तेश्रो सीजनको उत्कृष्ट नौ मा परेकी थिईन। बुद्ध केही समय अघि डान्सीङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनको...
आज सार्वजनिक भएकै दिन “पत्थरको मुटु” बोलको गीत चार लाख पटक यूटूब हेरीएर चर्चामा आएको छ। “पत्थरको मुटु” नामले टिकटकमा चर्चित नाम हो विजय पून। त्यो टिकटकको लोकप्रियता अब गीतमा पनि दोहोरिने देखीएको छ। आफ़्नो जीवनमा घटेको अधुरों प्रेमको जीवन्त शब्द र अभिनयमा डुबेका विजयलाई जोडीको...
नेपाल आइडल पहिलो सीजनका एक प्रतिस्पर्धी साहिल ज़मीर अलीको स्वरमा “भागेर जाऊ” बोलको लिरिकल भिंडियों गीत चर्चामा आएको छ। सार्वजनिक भएको दोश्रो सातामा तीन लाख पटक हेरीएको यो गीत स्लो भर्सनमा निकै मन छुने खालका शब्दहरु सहित आएको छ। कभर भर्सन गीतहरु गाएर चर्चामा आएका हुन साहिल। सुगम...
नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका सुमित पाठक र लोकप्रिय गायिका मीना निरौलाको स्वरमा आएको “आउ वर” बोलको गीत दर्शकको रोज़ाइमा परेको छ। झण्डै एक महीनामा आठ लाख पटक यूटूबमा हेरीएको यो गीतमा चर्चित कलाकारहरु असिफ शाह र बर्षा राउतको उत्कृष्ट क्लासिकल डान्स देख्न सकिन्छ। म्यूज़िक भिंडियोंको...
नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएकी गायिका अश्मिता अधिकारीको नया गीत यो साता सार्वजनिक भएको छ। “जाली भूगोल” बोलको यो गीतमा शब्द आनन्द अधिकारी र संगीत दीपक शर्माले दिएका छन। शान थापाले निर्देशन गरेको म्यूज़िक भिंडियोंमा अश्मिताले नै अभिनय गरेकी छिन।
गीतहरु, नेपाल आइडल, म्युजिक भिडियो
“उनको प्रीति”, “नबोली नबोली” लगायत पछिल्लो महीना आएका चर्चित गीतहरुका गायक प्रवीण बेडवालको स्वरमा “हाम्रो माया चर्किएको” बोलको गीत दुःखको भाव बोकेर चर्चामा आएको छ। यसमा उनलाई गाउन साथ दिएकी छन “उनको प्रीति” गीतकै गायिका रचना रिमालले। दुवैजना नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका अहिलेका...
आफ्नो प्रतिभा आफूलाई थाहा भएर मात्र नहुदो रहेछ! त्यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि कसैको आखा पर्नु पर्ने रैछ। हो, चर्चित गायक संगीतकार शिशिर भण्डारीले जब सुजन बाबु गुरुङलाई उनको हातको स्टीयरिंङ मात्र होईन गलाको कला बारे थाहा पाए अनि एउटा गीत जन्मियो। तब सुजनको सपना सुरीलों स्वरमा...
चर्चित हास्य कलाकार बुद्धि तामाङ एवम चर्चित कलाकारहरू सुधीर श्रेष्ठ, डिमोन क्षेत्री, उषा उप्रेती, श्रेया सिटौला लगायत अभिनित “झम्क्या बुलाकी” बोलको गीत आज यूटूबमा सार्वजनिक भएको छ। टेक बीसी र अश्मिता अधिकारीको स्वरमा आएको यस गीतको शब्द र संगीत भीम बीसीको रहेको छ। यो गीत ३ लाख...
भर्खरै सार्वजनिक भएको “सानु” बोलको लोक गीतमा चर्चित मोडल अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र पछिल्लो समय केही गीतहरु सफल भई चर्चामा रहेकी एलिजा गौतमको जोडीलाई देख्न सकिन्छ। एकै दिन ३ लाख माथि यूटूबमा हेरीएको यो गीतलाई चर्चित गायक प्रताप दास, समीक्षा अधिकारी र बाल गायिका आयुसा गौतमले स्वर...
भर्खरै सार्वजनिक भएको “लज्जावती झार” बोलको गीत निकै मन पराईएको छ। चर्चामा रहेका गायक महेश काफ्ले र नेपाल आइडलबाट उदाएकी अश्मिता अधिकारीको स्वर रहेको यो गीतमा गायक महेशकै शब्द र संगीत रहेको छ । एकै दिनमा ४ लाख यूटूब भ्यूज नजिक रहेको यो गीत ट्रेण्डिङमा आउने सम्भावना रहेको छ।...
“के माया लाग्छ र?” गीतले डेड करोड़ भ्यूज नजिक रहेको बेला नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका निशान भट्टराई र सोनिका लामाले गाएको अर्कों गीत ट्रेण्डिङ भैरहेको छ । लाइम लाइट यूटूब चैनलले सार्वजनिक गरेको “आटो पीठो” बोलको गीत एकैदिनमा ५ लाख यूटूब भ्यूज पुग़्दैछ। यो गीतमा दीपक शर्माको शब्द र...
नेपाल आइडलबाट चर्चाको शिखरमा पुगेका गायक बिक्रम बराल फेरि डाडा काटेर चर्चामा आएका छन । उनको पछिल्लो गीत “सयौ डाडा काटदै आए” एकै दिनमा यूटूबमा ४ लाख भ्यूज कटेर ट्रेण्डिंङमा छ।पासाङ शेर्पाको शब्द र हरी लम्साल संगीत रहेको यो गीतको म्यूज़िक भिंडियोंको निर्देशन निकेश खड़काले गरेका...
अपडेट भाद्र १२, २०७७– अन्तत नेपाल आइडलले पायों यो वर्षको आइडल! हरेक विधामा निपुणका साथ गाउने एवं पहिलो महिला आइडलको रूपमा मोरङकी सज्जा चौलागाईलाई सबैले सम्झिनेछन तेस्रो भाग विजेताको रूपमा। कड़ा प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ३ मा रहेका प्रवीण बेडबाल र किरण भूजेलले दोश्रो र तेस्रो...
“डर छैन” भन्दै बिपीन कार्कीले उत्कृष्ट अभिनय देखाए !
“ढाका-धोती” मधेस हिपहप चर्चामा !
मुसुक्क हास्न फरक तरिकाले सिकाउने गीत
“जहाँ छोड्यौ तिम्ले त्यही ढली राछु म”
तीजको रौनक थप्दै चर्चामा- “फ़रिया लरीलै बरिलै…”